शनिवार नकिन्नु होस् यी ५ चीज, नत्र जैले नोक्सान होला - Dainik Plus
शनिवार नकिन्नु होस् यी ५ चीज, नत्र जैले नोक्सान होला
यदि तपाई शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने शनिवारको दिन किनमेल गर्दा थोरै सम्हालिनुहोस् । शास्त्रमा केही यस्ता चीजका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जुन शनिवारको दिन किनमेल गर्नु हुँदैन । खासगरी, फलामबाट बनेको चीज छ भने त्यसलाई नकिन्दै राम्रो हुन्छ ।
१. फलामको किनमेल – फलामलाई शनिदेवको धातु मानिन्छ र शनिवारको दिन फलामबाट बनेको सामान दान गर्नाले शनिदेव प्रसन्न हुन्छन् भन्ने पनि मान्यता छ । तर, यदि तपाई यसको विपरित फलाम किनमेल गर्नुभयो भने तपाईको घर–परिवारमा संकटको पहाड खस्न सक्छ । तपाई आर्थिक रुपले चिन्तित बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईको काम बन्दा–नबन्दै बिग्रिन्छ ।२. नुन र तेल – शास्त्रअनुसार, शनिवार नुन र तेलको खरिद गर्नाले छालासम्बन्धि रोग हुनसक्छ ।३. कालो तिल – शनिवारको दिन कालो तिल किन्नाले परिवारमा विपत्ति आउँन सक्छ ।४. कालो जुत्ता – शनिवारको दिन कालो जुत्ताको किनमेल पनि तपाईलाई आपत निम्त्याउँने कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ । शनिवार किनेको कालो जुत्ता लगाएर कुनै काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको दिन नै नराम्रो हुने र काममा बाँधा आउँन सक्ने बताइएको छ ।५. कैची र मसी – शनिवारको दिन कैची किन्नाले सम्बन्धमा खटपट आउँन सक्छ भने मसी किन्नाले जीवनमा असफलता मात्रै आउँछ ।-(नेपाली हेडलाइन्स)
यो पनि पढ्नुसः आफ्नो जन्म कुण्डलीबाट यसरी थाह पाउनुहोस्, दुर्घटना हुन सक्ने समय र यसबाट बच्ने उपाय
कुण्डली जाच्नु एउटा गहन कार्य हो, यसको कारण हो ज्योतिष अपवाद, जसको कारणले एकै किसिमको कुण्डली भएको मानिसहरुको जीवन अलग-अलग हुन जान्छ। ज्योतिष शास्त्रमा एउटा जटिल बिद्या हो, शायद त्यसैले धेरैजसो ज्योतिषाचार्य खोक्रो रूपमा जाँचेर भविष्यवाणी गर्दिने गर्छन् जसले धेरैजसो अवस्थामा हानिकारक साबित हुन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि ज्योतिषमा धेरै थोरै कुराहरु थाहा हुनुपर्छघटना र दुर्घटना जुनसुकै अवस्थामा पनि कुण्डलीद्वारा कुन समयमा हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। आज हामी तपाइलाई बताउछौ कि तपाइको कुण्डलीको आधारमा जीवनमा हुने दुर्घटनाको र योगलाई कसरी जान्न र बुझ्न सकिन्छ।जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा छैटौं र आठौं भावका स्वामी अशुभ ग्रहको साथमा बसेको हुन्छ यस्तो व्यक्तिको जीवनमा दुर्घटना घट्ने संभावना भीषण हुनसक्छ।
ज्योतिष शास्त्रको अनुसार दुर्घटनाको सिधा सम्बन्ध लग्न र लग्नेशसँग हुन्छ। लग्नको अर्थ शरीर हुन्छ, त्यसैले यस्तो भन्ने गरिन्छ कि लग्नमा शुभ ग्रह हुनु उत्तम हुन्छ। मारक वा अशुभ ग्रहले जब लग्न र लग्नेशमा गोचर गर्छन् त्यो व्यक्ति दुर्घटनाको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। यदि त्यहि मारक ग्रहको अन्तरदशा चलिरहेको छ भने जातकमा दुःख र कष्ट पुग्ने योग बन्छ।आउनुहोस् जानौ दुर्घटनाको लागि कुन ग्रह र यो जिम्मेदार हुन्छन् मंगल र शनि ग्रह मिलेर दुर्घटनाको योग बनाउछन्। त्यहि लग्न अथवा दोस्रो भावमा राहु र मंगल सामिल छन् भने दुर्घटनाको योग बन्छ लग्नमा शनि र मंगल ग्रह हुनु अशुभ संकेत हो। तेश्रो भावमा मंगल र शनि छ भने पनि घातक साबित हुन्छ। जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु पनि तय नै हुन्छ, तर असामयिक मृत्यु र शारीरिक पिडाबाट बच्नको लागि तपाई केहि उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् जानौ दुर्घटना र कुनैपनि नराम्रो कुराबाट बच्नको लागि प्रभावकारी ज्योतिष उपाय।
हनुमान जी को आराधनाले आउने खतरा टाढा हुन्छन् । हनुमानको मन्दिर गएर माटोको दियोमा चमेलीको तेलको दियो बाल्नुस। हनुमान मन्दिरको पुजारीसँग आफ्नो हातमा रातो डोरो बाध्नु शुभ हुन्छ। यसको तसर्थ चराहरुलाई रातो दाल खुवाउनु पनि शुभ हुन्छ । आफ्नो घरको छतमा रातो झण्डा रख्नुस र एउटा कागतिमा सिन्दुर लगाएर घरको छतबाट फ्याकिदिनुस।नरिवलमा डोरो बाधेर हनुमान जीलाई अर्पित गर्नुस् र हनुमानको मुर्तिमा रातो फुल चढाउनुस।
१. जन्म कुण्डली: तपाइको जन्म कुण्डली तपाइको अतीत, वर्तमान र भविष्यको एना हो। तपाईले भविष्यमा कस्तो कस्तो समस्याको सामना गर्नुहुन्छ, कुन समय कुन घटनाले तपाइको जीवनलाई कुन मोडमा पुर्याईदिन्छ यो सब कुण्डलीको मूल्यांकनबाट थाहा पाउन सकिन्छ।२. कुण्डली जाच्नु: कुण्डली जाच्नु एउटा गहन कार्य हो, यसको कारण हो ज्योतिष अपवाद, जसको कारणले एकै किसिमको कुण्डली भएको मानिसहरुको जीवन अलग-अलग हुन जान्छ।३. ज्योतिष शास्त्र: ज्योतिष शास्त्रमा एउटा जटिल बिद्या हो, शायद त्यसैले धेरैजसो ज्योतिषाचार्य खोक्रो रूपमा जाँचेर भविष्यवाणी गर्दिने गर्छन् जसले धेरैजसो अवस्थामा हानिकारक साबित हुन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि ज्योतिषमा धेरै थोरै कुराहरु थाहा हुनुपर्छ
४. घटना र दुर्घटना: घटना र दुर्घटना जुनसुकै अवस्थामा पनि कुण्डलीद्वारा कुन समयमा हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। आज हामी तपाइलाई बताउछौ कि तपाइको कुण्डलीको आधारमा जीवनमा हुने दुर्घटनाको र योगलाई कसरी जान्न र बुझ्न सकिन्छ।५. जीवनमा दुर्घटना: जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा छैटौं र आठौं भावका स्वामी अशुभ ग्रहको साथमा बसेको हुन्छ यस्तो व्यक्तिको जीवनमा दुर्घटना घट्ने संभावना भीषण हुनसक्छ।६ . लग्न र लग्नेश ज्योतिष शास्त्रको अनुसार दुर्घटनाको सिधा सम्बन्ध लग्न र लग्नेशसँग हुन्छ। लग्नको अर्थ शरीर हुन्छ, त्यसैले यस्तो भन्ने गरिन्छ कि लग्नमा शुभ ग्रह हुनु उत्तम हुन्छ।
७. मारक वा अशुभ ग्रह: मारक वा अशुभ ग्रहले जब लग्न र लग्नेशमा गोचर गर्छन् त्यो व्यक्ति दुर्घटनाको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। यदि त्यहि मारक ग्रहको अन्तरदशा चलिरहेको छ भने जातकमा दुःख र कष्ट पुग्ने योग बन्छ।८. योग आउनुहोस् जानौ दुर्घटनाको लागि कुन ग्रह र यो जिम्मेदार हुन्छन्९. मंगल र शनि: मंगल र शनि ग्रह मिलेर दुर्घटनाको योग बनाउछन्।१०. राहु र मंगल: त्यहि लग्न अथवा दोस्रो भावमा राहु र मंगल सामिल छन् भने दुर्घटनाको योग बन्छ।११. लग्नमा शनि : लग्नमा शनि र मंगल ग्रह हुनु अशुभ संकेत हो।१२. घातक तेश्रो भावमा मंगल र शनि छ भने पनि घातक साबित हुन्छ।३. ज्योतिष उपाय: जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु पनि तय नै हुन्छ, तर असामयिक मृत्यु र शारीरिक पिडाबाट बच्नको लागि तपाई केहि उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् जानौ दुर्घटना र कुनैपनि नराम्रो कुराबाट बच्नको लागि प्रभावकारी ज्योतिष उपाय।
१४. हनुमान मन्दिर: हनुमान जी को आराधनाले आउने खतरा टाढा हुन्छन् । हनुमानको मन्दिर गएर माटोको दियोमा चमेलीको तेलको दियो बाल्नुस।१५. रातो डोरो: हनुमान मन्दिरको पुजारीसँग आफ्नो हातमा रातो डोरो बाध्नु शुभ हुन्छ। यसको तसर्थ चराहरुलाई रातो दाल खुवाउनु पनि शुभ हुन्छ ।१६. कागतिमा सिन्दुर: आफ्नो घरको छतमा रातो झण्डा रख्नुस र एउटा कागतिमा सिन्दुर लगाएर घरको छतबाट फ्याकिदिनुस।१७. हनुमान जी: नरिवलमा डोरो बाधेर हनुमान जीलाई अर्पित गर्नुस् र हनुमानको मुर्तिमा रातो फुल चढाउनुस।dainikonline.net